Central City Apartment Ploiesti-Indawo yokupaka yasimahla - I-Airbnb
Central City Apartment Ploiesti-Indawo yokupaka yasimahla
I-wifi ekhawulezayo ye-429 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
Wamkelekile kwiflethi yethu etofotofo nenobubele embindini wesixeko sasePloiesti.
Ngaba ufuna ukwazi ukuba yintoni oza kuyifumana kule flethi okanye kwindlu ekwicomplex? Vala amehlo akho uze uhambe nam!
Vula enye yeminyango yesakhiwo (umnyango okhokelela kwindawo yokupaka kunye nomnye umnyango oya kwisakhiwo secawa) uze ungene ngaphakathi. Uza kufumana ilifti eza kukusa kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex.
Sele ucinga ukuba uya kuhlala njani kwaye utye oko ukuphekileyo ekhitshini elixhotyiswe ngokupheleleyo (ngokuxhotyiswa ngokupheleleyo ndithetha nomatshini wekofu, hayi iifolokhwe kuphela, amacephe, iimela, izitya, iipleyiti, iipani, izinto zokupheka, imicrowave, iitawuli zephepha. , isitovu, infuser iti imbiza etc) phambi kwaloo 81 cm LCD TV. Sukuhamba kwaye uyijike ngoku, linda, zininzi iindawo onokuzibona.
Ndikubheja uyayibona iterrace kude kube ngoku. Ewe, kukho itafile enezitulo, apho unokusela iwayini eyayisengqondweni yakho. Apha kulapho uya kuthandana khona nefulethi eliziko leSixeko i-Ploiesti inombono omangalisayo phezu kwesixeko kunye nentaba.
Ixesha lokuma kweso situlo licolile kakhulu kwaye liphumle kwaye uya kulala ... Kutheni ungayi kwigumbi lokulala uze ulale? Thatha umthwalo kwaye uwubeke kwenye yeewodrophu ezimbini. Uya kufumana neengubo apho, iayini, izixhobo zokuthunga, izixhobo zoncedo lokuqala, amakhadi okudlala, isixhobo sokomisa iinwele.
Uyazi ukuba awukwazi ukulala ngoku: kufuneka uphume phandle, zininzi iindawo onokuzindwendwela ePloiesti kwaye awufuni kuchitha ixesha ngokulala, hayi ngoku. Hamba uye kuhlamba ubuso bakho, igumbi lokuhlambela likhona!
Uyifumene. Inayo yonke into oyifunayo: iitawuli, isepha, izinti zendlebe, ijeli yeshawa, ishampu kunye netyhubhu eshushu elungele ukuphumla emva kokuba ubuyile kuhambo lwakho.
Ibonakala intle? Ewe, yizame ngokwakho! Nika ithuba kwaye ubhukishe ngoku de kube kungemva kwexesha!
I-wifi ekhawulezayo – i-429 Mbps
81" HDTV ene-intambo yepremiyamu
Sifumaneka nanini na ngetekisi, ngefowuni okanye nge-imeyile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ploiești